I-Oceanfront - I-Cruise Complex - I-Airbnb
I-Oceanfront - I-Cruise Complex
Punta del Este, Maldonado, i-Uruguay
U-Ivana Ungumbungazi ovelele
Amakamelo amabili okulala ayi-en suite, ikhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokudlela, igumbi lokuhlala elikhulu elixhunywe nethala elinethezekile elibheke olwandle elinetafula labantu abangu-8, i-hammock ephumuzayo ne-barbecue.
Igumbi lokuwasha eline-balcony yesibili.
Indawo yokugezela yomphakathi.
Ifakwe ilineni (amashidi, amathawula, izindwangu zetafula namanabukeni).
I-Wifi ngesizini kaDisemba-Mashi ngaphakathi kwefulethi.
I-Wifi unyaka wonke ezindaweni ezivamile.
Ukushisisa nge-slab kagesi ngayinye yendawo ezungezile ngaphezu kwama-air conditioner ekamelweni ngalinye
Yifulethi elisha, elingenasici, elihlome ngokuphelele, esinye sezici zalo ezinhle kakhulu i-balcony enkulu ene-barbeque nombono ongenakunqotshwa wolwandle nokushona kwelanga. Futhi ukuthula nokuthula okufanayo kanye nokunethezeka kokuba namakamelo okulala amabili ngalinye linegumbi lalo lokugezela le-en suite. Inombhede ophindwe kabili kanye nemibhede emibili eyodwa. Kusukela ekhishini kanye negumbi lokulala lesibili ungabona ukuphuma kwelanga
Kusukela ekamelweni lokulala elikhulu, igumbi lokuphumula kanye ne-balcony ungabona ukushona kwelanga olwandle.
Kuyindawo enhle, ethule kakhulu, itholakala ku-Avenida Costanera Claudio Williman phambi kolwandle, ngomnyango udlula indlela yezinyawo kanye nebhayisikili elihlanganisa isakhiwo nenkaba yePunta del Este, 7 km, lapho bekhona. Zonke izinhlobo zezitolo, amathilomu, izindawo zokudlela, njll.
Uma unemibuzo, sizotholakala ngokuxhumana ngocingo okuvela e-Buenos Aires.
Ama-concierge kanye nabahlanzi bezindlu bazophinde batholakale esakhiweni nganoma yiziphi izidingo ezivelayo.